शारीरिक सम्बन्ध राख्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ? डाक्टरको भनाई यस्तो छ ! - Chitwan Online Khabar
शारीरिक सम्बन्ध राख्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ? डाक्टरको भनाई यस्तो छ !
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १३:५८ chitwan online khabarNo Comment on शारीरिक सम्बन्ध राख्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ? डाक्टरको भनाई यस्तो छ !
स्तन महिलाहरुको शारीरिक उत्तेजनामा यो.नी जति संवेदनशील हुन्छ । स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन । हुन त यो यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हो । तर किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने हालै मात्र वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् ।
अमेरिकाको रट्जर्स विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुले गरको अध्ययनले महिलाहरुको स्तनको टुप्पो र यो(नीमा हुने समान शारीरिक संवेदनशीलताको कारण यी दुइ अंगबाट प्रसार हुने संवेदना मस्तिष्कको एउटै भागले ग्रहण गर्नु हो ।
शारीरिक सम्पर्क गर्ने क्रमलाई आनन्दमय बनाउन मानिसहरू अनेक उपाय सोच्छन् ।शारीरिक सम्पर्कका क्रममा पुरुष साथीले महिलाको स्तन मिच्ने समेत गर्छन् । शारीरिक सम्पर्कअघि शारीरिक उत्तेजना बढाउन स्तन मिच्ने गरेपनि शारीरिक सम्पर्कका क्रममा स्तन मिच्नु ठीक हो कि होइन भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुन सक्छ ।
भारत्तोलनले मांशपेसी फूलाउने र हड्डी बलियो पारेजस्तै स्तन निचोर्दा स्तनको साइज बढाउने र क्यान्सर रोकथाम गर्ने आन्तिरिक शक्ति थपिने अध्ययनले देखाएको छ । शारीरिक रुपमा सँगसँगै स्तन मिच्दा महिला साथीलाई पनि आनन्द आउने भएकाले स्तन मिच्नु उत्तम नै हुने अध्ययनले जनाएको छ । यो(नी र भग्निशिखाको स्पर्शका बेला उत्पन्न हुने उत्तेजनालाई मस्तिष्कको जुन भागले ग्रहण गर्छ स्तनको टुप्पोको स्पर्शका बेला उत्पन्न हुने उत्तेजनालाई पनि सोही भागले ग्रहण गर्ने गर्छ ।
त्यसैले केही महिलाहरु स्तनको स्पर्श वा सुम्सुम्याइबाटै चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ ।अर्थात् स्तनमा हुने यहीँ संवेदनाको संचार र स्नायु सम्बन्धका कारण स्तनको भरपूर स्पर्शले मात्र पनि महिलाले चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्छिन् र उनलाई यो(नी र लिं(गको मिलन आवश्यक पर्दैन ।
आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा अनुसनधानकर्ताहरुले २३ देखि ५६ वर्ष सम्मका ११ जना महिलालाई उनीहरुको यो(नी र स्तनलाई सुम्सुम्याउन अह्राएका थिए । यसरी सिर्जना हुने उत्तेजनाका बेला उनीहरुको मस्तिष्कमा हुने परिवर्तनको अध्ययन गर्न मस्तिष्कलाई ब्रेन स्क्यानर भित्र राखिएको थियो ।
३१ प्रजिअको सरुवा